नेपाली चलचित्र कैफियत युट्युवमा सार्बजनिक
काठमाडौँ – दशरथ गिरिको निर्देशित चलचित्र कैफियत युट्युवमा सार्बजनिक गरिएको छ । यस चलचित्रमा नन्दिता केसी, नबिन श्रेष्ठ, सीपी पौडेल, शंकर शाही ठकुरी, किशन सुनुवार, सजना थापाको अभिनय रहेको छ । यस चलचित्रमा एक्शन, लभ स्टोरी एकसाथ देख्न सकिन्छ । यस चलचित्रमा नन्दिता केसी डबल रोलमा देखिएकी छिन् ।
वर्षालाई १० प्रश्न : अग्लो र बडी भएको पुरुष मनपर्छ
अभिनेत्री बर्षा राउत यतिबेला चर्चामा छिन् । चलचित्र अभिनय उनको चर्चाका बिषय हो ।..
‘कारखाना’को टिजरमा प्रेम र रोमान्स
काठमाडौ – पुुस २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘कारखाना’को टिजर बाहिर आए..
जुनीभरलाई बाधिए राज र इन्दिरा (भिडियो)
काठमाडौ – मोडल राज केसी र इन्दिरा केसीको अभिनय रहेको भिडियो ‘जुनी भर .’ सा..
एमटिभी म्युजिक अवार्ड दीपिकाको पहिरन चर्चा
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले लगाउने पहिरनको चर्चा हमेशा हु्ने गदर्छ । जुनै प..
यस्तो देखियो जात्राको प्रिमिएर (फोटोफिचर)
काठमाडौं – प्रचारका लागि अभिनेत्रीलाई सर्वसाधारण सँग डेटमा समेत पठाउन पछि नपरेको चलचित्र ‘जात्रा’को प्रिमियर गरिएको छ । बुधवार साँझ जय नेपाल चलचित्र भवनमा गरिएको प्रिमिएरमा चिनिएका कलाकारको उपस्थिती भने कमै थियो । चलचित्रले प्रचारका क्रममा बिभिन्न पुरस्कार योजना ल्याएको थियो । यो क्रममा बिजेता बनेका एक विजेतालाई विपिन कार्की ‘भष..
नयाँ रेकर्ड बनाउने लक्ष्यसहित सुरु भयो चलचित्र ‘जालो’
काठमाडौ – विश्वकै चलचित्र इतिहासमा नयाँ रेकर्ड बनाउने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको वानसट चलचित्र ‘जालो’ र ‘जालो रिटन्र्स’को काम सुरु भएको छ । बिहिबार मुर्हतसँगै चलचित्रको छायाँकन सुरु भएको हो । चलचित्रको कलाकार र प्राबिधिकको उपस्थितीमा बुढानिलकन्ठ मन्दिरमा पुजा गर्दै चलचित्र सुरु गरिएको निर्देशक अराज केसव गिरीले बताए । लव , कमे..
रञ्जनालाई फेरी पत्याउनलान् निर्माता/निर्देशकले ?
काठमाडौ – अभिनेत्री रंञ्जना शर्मा यतिबेला नेपालमै छिन् । दशैको छेको पारेर उनी ७ बर्षपछि अमेरिकाबाट फर्किएकी हुन् । केही महिना अझै नेपाल रहने उनी केही म्युजिक भिडियोमा देखिने तरखरमा छिन् । निर्देशक श्याम भट्टराईले सानोपर्दा मार्फत उनलाई अभिनयमा डेब्यु गराएका हुन् । उनले पहिलो चलचित्रको निर्देशक पनि श्याम नै रहेका थिए । श्यामसँग न..
‘कान्छी रे’ भन्दै नाचिन् अर्चना
काठमाडौं – ‘श्री ५ अम्बरे’ अभिनय पछि हराएकी अभिनेत्री अर्चना देलाल गायक टंक बुढाथोकीको ‘ए कान्छी रे’ बोलको नयाँ गीतमा देखिएकी छन् । अष्ट्रेलियामा खिचिएका रोमान्टिक गीतको भिडियोे अहिले सार्वजनिक गरिएको छ । गायक बुढाथोकीले यो गीतलाई पनि फरक ढंगबाट ल्याएका छन् । गीतमा उनलाई गायिका टिका प्रसाईले साथ दिएकी छन् । टंक आफ्ना गीतमा [&hel..
नेपाल लोकतान्त्रिक चलचित्रकर्मी संघमा सापकोटाको नेतृत्व
काठमाडौँ–नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन, नेपाल सास्कृतिक संघको शुभेक्छुक सस्थाको रुपमा ‘नेपाल लोकतान्त्रिक चलचित्रकर्मी संघ’को स्थापना भएको छ । वुधबार राजधानीमा आयोजित नेपाल लोकतान्त्रिक चलचित्रकर्मीहरुको भेलाले सन्दिप सापकोटाको नेतृत्वमा १७ सदस्य समिति समेत चयन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा वन मन्त्री शंकर भण्डा..
पोर्न स्टार बन्छु भन्ने अर्चना पनेरु यता भेटिइन् (भिडियोसहित)
काठमाडौं– अश्लिल र उत्तेजक दृश्य दिँदा पनि चलचित्र बजार तताउन नसकेकी अभिनेत्री अर्चना पनेरुले डान्सबार तताउन थालेको भेटिएको छ । बिगत एक महिनायता उनले नयाँ बसपार्कमा रहेको उर्वसी डान्स बार तताउदै आएको पाइएको हो । सो बारमा आउने ग्राहक हुस्की र बियरको चुस्कीसँर्गै उनको जावनी नियाल्दै नाच्ने गरेका छन् । केही म्युजिक भिडियो र दुई [&h..
‘प्रेम रक्षक’का गीतमा पञ्चेबाजा
काठमाडौं – चलचित्र ‘प्रेम रक्षक’को ‘पञ्चे बाजा घन्काउँदै…’ बोलको गीत रेकर्ड गरिएको छ । सधैँ सुगम संगीतमा ध्यान दिने संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठले यो गीतमा पाश्चात्य, भारतीय र नेपाली बाजाहरुको मिश्रण गरेर नौलो धुन बनाएका छन् । गीतमा पञ्चे बाजाले अलि धेरै महत्व पाएको छ । ‘पञ्चे बाजालाई प्रयोग गरेर दर्शक स्रोतालाई मनोरञ्जन ..
अमेरिकाबासी नेपालीलाई गायक राजेशको दर्शन नमस्ते
काठमाडौं – देशमा भन्दा बिदेशमा बढि समय बिताउँछन् चर्चित गायक राजेश पायल राई । सांगीतिक यात्राका क्रममा रहेका लोकप्रिय गायक राई यतिबेला अमेरिकाबासी नेपालीलाई दर्शन नमस्ते गरिरहेका छन् । अमेरिकाको बिभिन्न राज्यमा आफ्नो प्रस्तुती राख्दै आएका राईले सातौ प्रस्तुती साल्ट लेकमा पस्किएका छन् । कार्यक्रममा उनले ‘दर्शन नमस्ते ९३’ एल्बमका ..
अंग प्रदर्शन गरेर हिट हुन खोज्ने यी हट नायिका कता हराए ?
काठमाडौं–यति बेला दर्जनौं चलचित्र छायांकनका लागि फ्लोरमा छन् । ती भन्दा बढी चलचित्र छायांकन तरखरमा जुट्दै गरेको देखिन्छ । डबिङ र प्रचार प्रसारका कामले पनि कतिपय कलाकारलाई फुर्सद नै छैन । वर्षात्को मौसम नभएको र ठुला चाड पर्व सकिएकोेले पनि यो समय चलचित्र क्षेत्रको लागि उपयुक्त समय मानिन्छ । केही नायक नायिका त अहिले दोहोरो [&helli..
प्रियंकाको लामो कुराइमा परे अभिनेता दयाहाङ
काठमाडौं– एक घन्टा भन्दा बढी समय कुर्नुपर्दा कसलाई पो रिस उठ्दैन र ? तर, अभिनेता दयाहाङ राई भने रिसाएनन् उल्टै हाँसिरहे । सोमबार राजधानीको सिटीसेन्टरमा आयोजित चलचित्र ‘पुरानो डुङ्गा’को एक कार्यक्रममा अभिनेता राइ चलचित्र युनिट र आफ्नो जोडी बनेकी अभिनेत्री कार्कीको दह्रो कुराइमा परे । पौने तीन बजे सबैलाई निम्त्याइएको कार्यक्रममा द..
आर्मी जवानको सोल्टिनीसँग रोधीमा छमछमी
काठमाडौ – गायक दिल तामाङको शब्द, संगीत र स्वर रहेको ‘झल्को आयो रोधिमा नाचेको मायासँग कम्मरै भाचेको’ बोलको गीत अडियो भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भिडियोमा ‘भिम्फेदी गाइज’को बेजोड अभिनय देख्न सकिन्छ । ‘भिम्फेदी गाइज’ नेपालमा पछिल्लो समय चर्चा कमाइ रहेका युवाहरुको समुह हो । निर्मल लामाको निर्देशन रहेको भिडियोमा मकवानपुर..
‘ब्रान्ड भ्यालू’को शीर्ष पाँचमा पहिलो पटक महिला सेलिब्रिटीः शाहरुख सलमान उच्च स्थानमा, आमिर निकै टाढा
‘ब्रान्ड भ्यालु’ को विषयमा भारतका शीर्ष ५ सेलिब्रिटीमा पहिलो पटक महिलाको प्रवेश भएको छ । यसमा दीपिका पादुकोण तेस्रो र प्रियंका चोपडा पाँचौं स्थानमा छन् । सन् २०१४ को रिपोर्टमा कोही पनि महिला सेलिब्रिटी शीर्ष पाँचमा थिएनन् । महिलाले विज्ञापन गरेको थुपै ब्रान्डको संख्यामा पनि दुई वर्षम ५० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । अचम्मको कुरा [&h..
फिल्मको सुटिङमा भयो ठूलो दुर्घटनाः दुई हिरो डुबे, एक बच्न सफल
फिल्मका एक्सन दृश्यहरुको सुटिङ गर्नु निकै खतरनाक हुन्छ । यद्यपी, कुनै अप्रिय घटनाको सामना गर्नु नपरोस् भन्नका लागि यस्ता दृश्यका लागि सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर फिल्ममा यस्ता दृश्यहरु पनि हुन्छन् जसलाई कुनै सुरक्षा बिना नै छायांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । केही यस्ता खतरनाक दुर्घटना भएको छ एक कन्नडा फिल्म ‘मस्ती गुडी’ ..
मुस्कानद्वयलाई सातौं चाईल्ड आईकन
काठमाडौैं – ‘सातौं चाईल्ड आईकन–२०१६’को उपाधि मुस्कान बैद्य र मुस्कान जोशीले जितेका छन् । मिडिया ल्याण्डद्धारा काठमाडौंमा आयोजित सो प्रतियोगितामा ५३ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै ‘सिनियर चाईल्ड आईकन’को उपाधि लिटिल एञ्जल कक्षा ८ की विधार्थी मुस्कान बैद्यले जितेकी हुन् । यस्तै ‘जुनियर चाईल्ड आईकन’को उपाधि ३९ प्रतियोगीलाई पछि पार्दै डि..
सम्बन्धमा रहँदा यस्ता हर्कत गर्दथे रोनाल्डो, पूर्व प्रेमिकाले गरिन् चकित पारिदिने खुलासा
फुटबलका बादशाह भनेर चिनिने क्रिष्टियानो रोनाल्डोकी पूर्व प्रेमिका तथा रसियाली मोडल इरिना श्याकले रोनाल्डोको विषयमा निकै चकित पारिदिने खुलासा गरेकी छिन् । अब मोडल इरिनाले विवाह गर्दैछिन् । रोनाल्डोसँग ब्रेकअप भएपछि उनले हलिउड स्टार ब्राड्ली कूपरसँग विवाह गर्दैछिन् । रोनाल्डोसँग पाँच वर्षको सम्बन्धमा रहेकी यी सुन्दर मोडलले रोनाल्ड..
लिटिल प्रिन्सेसले देखाए ट्यालेन्ट
काठमाडौं – ‘लिटिल प्रिन्स एण्ड प्रिन्सेस’का प्रतियोगीले राजधानीमा आ–आफ्नो प्रतिभा देखाएका छन् । बेटर ग्यालेक्सी इन्टरटेनेमन्को आयोजना रहेको प्रतियोगीताको सहभागीले ट्यालेन्ट उपाधिका लागि प्रतिभा देखाएका हुन् । राजधानीको सिटी सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रममा ५६ प्रतियोगीले नृत्य, गीत, क्यारिकेचर, कराँतेकला, कत्थक नृत्य, अभिनय कलालगायत ..
पुर्वाञ्चलमै खोलियो पार्सल
काठमाडौ – मंसिर २४ गतेदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘पार्सल’को गीत, प्रोमो र पोस्टर एकसाथ सार्वजनिक गरिएको छ । आइतबार धरानको रत्न होटलमा एक कार्यक्रम गर्दै निर्माण युनिटले सो सार्वजनिक गरेको हो । रबिन श्रेष्ठको निर्देशन रहेको चलचित्र किशोर सम्वाहाम्फे लिम्बूले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा अधिकांश दृश्य पूर्वाञ्चलकै रह..
यसरी गरिन् अभिनेत्री रेखा थापाले छठ पुजा
काठमाडौं– एक दशक देखि छठमा व्रत बसेर पूजासँगै मनाउदै आएकी चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाले यसबर्ष पनि ब्रत बसेर छठी माताको पूजा गरेकी छन् । आइतबार दिनभर ब्रत बसेर उनले साँझ गौरीघाटमा गएर छठी माताको पुजा गरेकी हुन् । तस्बिरमा हेर्नुहोस् रेखाको छठ पुजा तस्बिरः उनकै फेसबुक
युएईका विभिन्न ८ शहरका १७ फिलिम हलमा छक्का पञ्जा हेर्न पाइने (हलको विवरण सहित)
युएई – नेपाली चलचित्रको ऐतिहासिक चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ युएईका दर्शकले हेर्न पाउने भएका छन् । नेपाली चलचित्रको उच्च कमाइ गर्ने फिल्ममा रेकर्ड राखिरहेको ‘छक्का पञ्जा’ आगामी नोभेम्बर १० तारिकदेखि युएईका विभिन्न ८ शहरका १७ फिलिम हलमा लाग्ने भएको छ । नेपाली चलचित्र युएईको बरदुबई, क्यारिफोर सिटीसेण्टरको भोक्स सिन्धगा सिनेमा हलमा दुबईक..
‘तरकारीवाली’ लाई पछ्याउँदै नायिका केकीले आफूलाई भनिन् ‘मोबाइलवाली’
काठमाडौं – तरकारीवाली एकाएक भाइरल भएपछि सोसल मिडियामा आफ्नो फोटो पोष्ट गर्दै मानिसहरुले आफूले आफैंलाई विभिन्न हाँस्यास्पद उपनाम दिन थालेका छन् । कसैले आफूलाई ‘भैंसीवाली’ भनेको छन् भने कोही बनेका छन् ‘तारवाली’, ‘मेकानिकवाली’, ‘साडीवाली’, ‘डाकोवाली’ आदि इत्यादी । यस्तै लहरमा नायिका केकी अधिकारी पनि परेकी छिन् । उनले आफ्नो आधिकारीक..